Sai Sai Kham Leng MP3 Download | MP3 Free Download All Songs
Sai Sai Kham Leng Album & Songs - Play Sai Sai Kham Leng songs online at Joox, Best of Sai Sai Kham Leng and greatest hit album by Myanmar - R&B singer are now online streaming. Listen to your favourite Sai Sai Kham Leng singles, and hit songs now! စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သည် တိုင်းရင်းသားရှမ်းမင်းမျိုးမင်းနွယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပျိုတိုင်းကြိုက် လူသိများသော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အောင်မြင်ကျော်ကြားဆဲ မြန်မာဟစ်ဟော့အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးသူ, မော်ဒယ် နှင့် ဝတ္ထုရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ မွေးနေ့ - 10 April 1979 အမျိုးအစား - R&B, Pop Label : Frenzo Porduction စတင်ဝင်ရောက်သည့်နှစ်- 1999 Albums : •	ချောကလက်ရောင် ရေခဲအိပ်မက် (Chocolate-coloured Icy Dream) (2000) •	"သူငယ်ချင်း များစွာ" (Many Friends) (2001) •	"ဖေဖော်ဝါရီ မှတ်တမ်း" (February Diary) (2003) •	Sai Sai Live in Yangon (2004) •	"စိုင်းစိုင်း ဟု ခေါ်သည်" (It is Called Sai Sai) (2005) •	Happy Sai Sai Birthday (2007) •	"အမြဲတမ်း ဂေါ်လီ" (Always Dwifter) (2009) •	"ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ" Date Date Kye (Topnotch) (2012) •	"စိုင်းစိုင်းကစိုင်းစိုင်း" "Sai Sai is Sai Sai" (2018 April) Reference: Wikipedia
A Night With Myo Kyawt Myaing
သိင်္ဂါရသီချင်းတစ်ပုဒ် feat Pyae Sone
ယုံပါ (OST - ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ)
လိမ်စမ်းညာစမ်း Feat Pyae Sone
Happy Sai Sai Birthday
ကမ္ဘာမြေသီချင်း19 Apr 2020
အို.....ကမ္ဘာမြေ8 Apr 2020
ယုံပါ (OST - ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ)14 Mar 2020
Fight Like A Girl11 Jul 2019
Sai Sai is Sai Sai8 May 2019
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ1 Jan 2013
About Sai Sai Kham Leng
Sai Sai Kham Leng Album & Songs - Play Sai Sai Kham Leng songs online at Joox, Best of Sai Sai Kham Leng and greatest hit album by Myanmar - R&B singer are now online streaming. Listen to your favourite Sai Sai Kham Leng singles, and hit songs now!
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သည် တိုင်းရင်းသားရှမ်းမင်းမျိုးမင်းနွယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပျိုတိုင်းကြိုက် လူသိများသော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အောင်မြင်ကျော်ကြားဆဲ မြန်မာဟစ်ဟော့အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးသူ, မော်ဒယ် နှင့် ဝတ္ထုရေးဆရာတစ်ဦး  ဖြစ်ပါသည်။
မွေးနေ့ - 10 April 1979
အမျိုးအစား - R&B, Pop
Label : Frenzo Porduction
•	ချောကလက်ရောင် ရေခဲအိပ်မက် (Chocolate-coloured Icy Dream) (2000)
•	"သူငယ်ချင်း များစွာ" (Many Friends) (2001)
•	"ဖေဖော်ဝါရီ မှတ်တမ်း" (February Diary) (2003)
•	Sai Sai Live in Yangon (2004)
•	"စိုင်းစိုင်း ဟု ခေါ်သည်" (It is Called Sai Sai) (2005)
•	Happy Sai Sai Birthday (2007)
•	"အမြဲတမ်း ဂေါ်လီ" (Always Dwifter) (2009)
•	"ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ" Date Date Kye (Topnotch) (2012)
•	"စိုင်းစိုင်းကစိုင်းစိုင်း" "Sai Sai is Sai Sai" (2018 April)
JOOXArtistsSai Sai Kham Leng